Izindaba - Gallic Acid Preparation
Indlela ye-acid hydrolysis ihlukaniswe ikakhulukazi yaba yinyathelo elilodwa kanye nezinyathelo ezimbili. Inqubo yokugeleza okuyizinyathelo ezimbili zokulungiswa kwe-gallic acid impahla eluhlaza → isizinda samanzi ashisayo → isihlungi esisele → i-tannin isixazululo samanzi esiqukethe cishe i-20% → i-acid hydrolysis → i-crystallization yokupholisa → i-centrifugation ukuthola umkhiqizo ongahluziwe → Ukuqedwa komkhiqizo ongahluziwe namalahle decolorization → ngemuva kokuhlunga Ukupholisa kanye ne-crystallization → i-centrifugation → ukomisa → umkhiqizo ophelile we-gallic acid. Inqubo yesinyathelo esisodwa yokulungisa i-gallic acid isusa isidingo sesinyathelo esisodwa se-leaching cyanine ngokuqhathaniswa nenqubo yezinyathelo ezimbili. It is directly added with acid acid indlela yokuphuma emithonjeni yehlathi ezindaweni ezinezintaba.
Kodwa-ke, i-acid ye-sulfuric esetshenziswe ngendlela ye-acid hydrolysis iyi-asidi enamandla, ebeka okokusebenza emabangeni ahlukahlukene. Yize zombili izihlungi zokuphendula nefriji zenziwe ngensimbi engagqwali, ngenxa yezinga lokushisa eliphakeme lokuphendula kanye nokuhlushwa kwe-asidi ephezulu, ukugqwala kusobala, okuthinta ngqo impilo yesevisi yemishini.
I-alkaline hydrolysis ukwenza i-hydrolyze ukukhishwa kwempahla eluhlaza, okungukuthi, isixazululo se-tannin e-aqueous ngaphansi kwezimo ze-alkaline, bese kunciphisa futhi ku-acidify nge-asidi ukukhiqiza i-gallic acid.
Inqubo enkulu igeleza izinto zokusetshenziswa → isizinda samanzi ashisayo → i-alkali hydrolysis → i-acid neutralization → i-crystallization yokupholisa → i-centrifugation ukuthola umkhiqizo ongahluziwe → Ukuqedwa komkhiqizo ongahluziwe namalahle decolorization → ukuhlunga kanye ne-crystallization → i-centrifugation → ukumisa → i-gallic acid product.
Uma kuqhathaniswa nendlela ye-acid hydrolysis, indlela ene-alkaline hydrolysis ayonakalisi kakhulu okokusebenza futhi yehlisa kakhulu ukwehla kwemishini, kepha inqubo iyinkimbinkimbi kakhulu kunendlela ye-acid hydrolysis. Iningi lokukhiqizwa kwe-gallic acid yasekhaya lisebenzisa i-alkaline hydrolysis. 
Indlela yokuvutshelwa isebenzisa ama-microorganisms ukuvutshelwa kwisisombululo esinamandla esiqukethe ama-tannins, futhi isebenzisa i-glucose kuma-tannins njengomthombo wekhabhoni wokukhula nokuzala kwama-microorganisms. Ama-enzyme wezinto eziphilayo abangelwa ngamagciwane enza ukuthi i-hydrolysis yama-tannins ibe namandla.
Inqubo flow Gaya izinto zokusetshenziswa kububanzi obungaphansi kuka-10mm → hlunga isinambuzane esimpuphu → cwilisa emanzini ukukhulisa isixazululo se-tannin esingu-30% → engeza izinhlobo zezikhunta ezimnyama → ukuvutshelwa izinsuku eziyi-8-9 → ukuhlunga → ukuwasha kabusha kabusha → i-gallic acid yezimboni.
Inkinga enkulu endleleni yokuvutshelwa ukuthi ukwakheka kwama-enzyme ezinto eziphilayo kanye ne-hydrolysis yama-tannins kwenziwa esitsheni esifanayo sokuphendula, futhi izimo zenqubo zinzima ukufinyelela esimweni esifanelekile, okuholela kumjikelezo wokuphendula omude (ngaphezu kwe-3 izinsuku), i-hydrolysis engaphelele yama-tannins, nama-tannins asalile Kuze kube ngu-15% ~ 20%.
Ngokubheka ukushiyeka kwendlela yokuvutshelwa, kwenziwe ucwaningo ngezinqubo ezintsha ze-enzymatic ekhaya naphesheya. Ukhiye wendlela ye-enzymatic ukuskena nokulungisa ama-enzyme ezisebenza kahle kakhulu. I-Tanninase iyi-acetyl hydrolase, eyi-acyl hydrolase engaphandle, engasebenza kahle, ikakhulukazi, futhi ihlanze isibopho se-ester, isibopho sediphozi kanye nesibopho se-glycosidic kuma-molecule e-tannin ukukhiqiza i-gallic acid. Ngaphansi kwezimo ezifanele, izikhunta ezahlukahlukene nama-tannins e-inducer angakhiqiza i-tannase. Uhlobo olusetshenziswa kakhulu yi-Aspergillus niger.
Inqubo flow Ukulima imbewu ye-Enzyme → ukukhiqizwa kwe-enzyme yokuvutshelwa → (engeza izinto zokusetshenziswa) i-hydrolysis → ukuhlunga → ukuhlushwa → i-crystallization ekhuluphele → ukuhlukaniswa → i-decolorization → i-crystallization eyinhloko → i-crystallization yesibili → ukumisa → ukuchoboza → i-gallic acid eqediwe.
Uma kuqhathaniswa nendlela yokuvutshelwa, indlela ye-enzymatic isifinyeze kakhulu isikhathi sokuphendula, izinga lokuguqulwa kwe-tannin hydrolysis lingaphezu kwama-98%, futhi inkomba yokusetshenziswa nezindleko zokukhiqiza zincishiswe kakhulu.